FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA : Kandidà roa no nanatitra ny taratasy fametraham-pialany teny amin’ny Ces
Tapitra ny Alatsinainy teo ny fe-potoana farany fananterana ny antontan-taratasy fametraham-pialan’ireo kandida filoham-pirenena mitana andraikitra eo anivon’ny Andrimpanjakana isan’antokony. 26 août 2013
Hatramin’ny fotoana nanoratana dia nanatanteraka izany ny Praiminisitra lefitra Andrianainarivelo Hajo sy ny Ct Voninahitsy Jean Eugène.
Taorian’ny fanemorana ny datim-pifidianana dia fanindroany izany izao no nanatanteraka ny fametraham-pialany ireo kandidà mitana andraikitra ambony eo anivon’ireo Andrimpanjakana isan’antokony, ankoatra ny minisitry ny Asam-panjakana sy ny asa sosialy, Tabera Randraiamanantsoa.
Raha tsiahivina dia 11 no isan’izy ireo ka ny efatra minisitra, enina avy ao amin’ny CT sy CST raha iray kosa ny Masoivoho miasa any Genève dia ny kandida Camille Vital. Raha araka ny lalàna mifehy ny fifidianana dia 60 andro mialoha ny datim-pifidianana no tokony hametra-pialana izy ireo.
Tsy nisy aloha ny fanehoan-kevitra politika nataon’ireo kandidà sy ny solontenany, nandritra ny fanaterana izany taratasy fametraham-pialana izany saingy samy nanamafy ny tokony handraisan’ny rehetra andraikitra ny amin’ny fanatontosana ny fifidianana izy ireo. Ho an’ny Kandida Hajo Andrianainarivelo dia nanamafy fa « ny fifidianana ihany no ahafahana miala amin’izao krizy izao ka tokony hanao ny adidiny manandrify azy ny isam-batan’olona ka tsy ho voarebirebin’ny fanehoan-kevitra mifanohitra amin’ny fanapahan-kevitra efa noraisina ».